Barnaamijka deeqda Gargaarka Bulshada ee aan macaash doonka ahayn wuxuu u furan yahay ururada u adeegaya rug cadaaga gobolka Washington - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Barnaamijka deeqda gargaarka bulshada ee aan macaash doonka aheyn ayaa ufuran ururada adeega ruug cadaaga ee gobolka Washington
OLYMPIA, WASH - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington waxay iskaashi la leedahay Waaxda Gobolka Washington ee Arimaha Halyeeyada (WDVA) si ay u maamusho $ 1.25 milyan oo ah deeq soo celinta bulshada aan macaash doonka ahayn (NCR) oo loogu talagalay deeqda ururada adeegga halyeeyga ah (VSOs).
Deeqdu waxay diiradda saareysaa gobolka oo dhan VSO oo leh shabakado cutubyo maxalli ah. Macluumaad dheeraad ah iyo foomam codsi ayaa laga heli karaa dva.wa.gov/ncrgrant. Dhammaan codsiyada la helay 11: 59 on May May 24, 2021 waxaa loo tixgelin doonaa.
"Markii aan horay u fiirineyno dib u furista iyo soo kabashada, waxaan rabnaa inaan hubinno in deeqdayada deeqdu ay gareyso qeybaha iyo jaaliyadaha si aan kala sooc laheyn loo saameeyay ama looga tagay barnaamijyadii hore ee deeqda," ayay tiri agaasimaha ganacsiga Lisa Brown. “VSO-yadayada ayaa muhiim u ah hubinta in halyeeyadayada ay helaan taageerada ay u baahan yihiin inta lagu jiro aafada. Aad ayaan ugu faraxsanahay fursadan aan kula wadaageyno WDVA dadaalkan. ”
“VSO-yadu waxay naga caawiyaan dhisida bulshada iyo taageerida himilada WDVA U adeegida Kuwa U adeegay, ”Ayuu yiri Agaasimaha WDVA Lourdes" Alfie "Alvarado-Ramos. "VSOs waxay fursad u siisaa halyeeyada inay la xiriiraan asxaabtooda, helaan caawinaad buuxinta sheegashooyinka naafada ee VA-da, waxayna u adeegaan sidii goobo ay isugu yimaadaan tiro kale oo ka mid ah ururada bulshada ee aan macaash doonka ahayn."
Alvarado-Ramos wuxuu intaas ku daray in dib u soo kabashada VSOs ay muhiim u tahay dhaqaalaha sii socda ee faafa iyo bulshooyinka caafimaadka qaba ee ku dhex nool Washington.
Deeqahaan soo kabashada ee faafa waxaa maamuli doona WDVA ilaa VSOs ee gobolka Washington. Ururada ay hogaamiyaan iyo / ama u adeegaan bulshooyinka dhaqaalahoodu hooseeyo, dadyowga dhaqamada kala duwan, iyo kooxaha aan matalin ayaa lagu dhiirigelinayaa inay codsadaan.
Deeqaha waxaa loo qaybin doonaa hay'adda VSOs ee aan macaash doonka ahayn ee gobolka oo dhan. Ururada uqalma waa inay lahaadaan 501 (c) (3), 501 (c) (4), ama 501 (c) (19), oo wata dukumiintiyo ku habboon tan iyo sanadkoodii maaliyadeed ee 2019.
Ururada gobolka oo dhan leh qoraalo kaladuwan waa cutubyo si xoog leh loogu dhiirigalinayo inay soo gudbiyaan hal codsi iyaga oo u maraya hay'ada gobolka oo dhan iyagoo matalaya dhamaan qoraalada iyo cutubyada.
Ma jiro uguyaraan ama ugu badnaan xaddiga abaalmarinta. Abaalmarinta waa in loo adeegsadaa in lagu daboolo kharashyada soo baxay inta udhaxeysa Maarso 1, 2020 iyo Juun 30, 2021, sababo la xiriira dhaqaale xumo soo food saartay COVID-19 oo faafay. Lacagaha waxaa lagu bixin doonaa deeqo aan xadidnayn laakiin looma isticmaali karo in lagu daboolo kharashyada ay horey u dabooleen COVID-19 kale ee la xiriirta maalgalinta dadweynaha ama kuwa gaarka loo leeyahay oo ay ku jiraan lacagaha Barnaamijka Badbaadinta Jeegga.
Barnaamij deeq gaar ah ayaa loo heli karaa ururada halyeeyada aan ahayn VSO 501 (c) (3). Ganacsiga oo iskaashi la leh ArtsFund ee loogu talagalay an Barnaamijka deeqda NCR waxaa diirada lagu saaray fanka, dhaqanka, xaafadaha, ciyaaraha iyo madadaalada iyo ururada halyeeyada ah. Xariirka dalabkooda sidoo kale wuxuu furan yahay illaa 24-ka Maajo.
Ilaa hadda, Ganacsigu wuxuu bixiyay in kabadan $ 822 milyan oo ah gargaarro iyo ka-soo-kabashada gobolka oo dhan. Maalgelinta hay'adaha aan macaash doonka ahayn waxaa ka mid ah $ 11.8 milyan ilaa in ka badan 350 oo aan faa'iido doon ahayn oo lala kaashanayo Philanthropy Northwest, $ 9.9 milyan ilaa in ka badan 400 barnaamijyo horumarineed oo dhallinyaro ah oo lala kaashanayo Iskuulka 'Out Washington', $ 2.5 milyan oo la siinayo ururrada bulshada ee lagu kalsoon yahay si loo siiyo dhaqan ahaan iyo luuqad ahaan ku habboon gaarsiinta iyo caawimaad farsamo oo loogu talagalay dadka yaryar ee kala duwan. milkiileyaasha ganacsiga, iyo $ 1.5 milyan in ka badan 250 ururo farshaxan oo iskaashi la leh ArtsWA. Intaa waxaa sii dheer, seddex wareeg oo ah deeqaha Washington ee shaqeeya ayaa bixiyay $ 125 milyan oo gargaar ah oo loogu talagalay ku dhowaad 11,000 ganacsiyada yaryar, iyada oo $ 240 milyan oo kale ay dhowaan iman doonto Wareega 4. halkan.
Media Nala Xiriir
Heidi Audette Isgaarsiinta WDVA, 360-791-8966
Penny Thomas Isgaarsiinta Ganacsiga, 360-704-9489
Deeqaha bulshada iyo amaahdadeeqoWar-saxaafadeed
← Hogaamiyaasha gobolada waxay ku boorinayaan wadayaasha inay sii qorsheeyaan markay tahay shidaalka inay sii kordhaan maadaama safarka wadooyinka uu sii kordhayo inta lagu jiro xilliga safarka Ganacsiga ayaa abaalmarin $ 4 milyan ah si looga dhigo dhismayaasha bulshada kuwo tamarta ku habboon →